Muudama kaabinoota Itoophiyaa: Kana booda rakkina caasaa komachuun ulfaataadha - BBC News Afaan Oromoo
Muudama kaabinoota Itoophiyaa: Kana booda rakkina caasaa komachuun ulfaataadha
20 Elba 2018
Paarlaamaan Itoophiyaa yaa'iisaa idilee kaleessa taa'een muudamootaa garagaraa Ministira Muummeetiin dhiyaatan raggaasiseera. Aanga'oonni mudaman 16 yoo ta'an isaan keessaa 10 haarawa kan muudaman yoo ta'u, 6 ammoo kanneen duraan turaniidha.
Dabalataanis ministirri muummichaa Dr. Abiy Ahimad angawoota mootummaa fedeeraalaa 9 muudaniiru.
Muudamoota kanneen keessaas, Afyaa'ii mana marichaa kan turan Obbo Abbaaduulaa Gammadaa gorsaa tikaa ministira muummichaa tahuun muudamaniiru.
Akka Ministira Muummichaatti, hoggantoonni haaraa filamaniifi bakka walbuusan kunniin rakkoolee ijoo amma sadarkaa yaaddessaarra ga'an kanaaf fala ta'u danda'u yaada jedhuun filatan.
Namoonni BBCn haasofsiise keessaa, jiraataan Magaalaa Kofalee tokko, hirmaannaa dubartootaa cimsuuf gara aangootti fiduun isaanii nu gammachiiseera jedheera. ''Sadarkaan barnootaa isaaniis kan ilaalame waan taheef, amaanaa uummataa galmaan ni gahu,'' jedha.
Jiraataan biraas, ''Jalqabbiin amma jiru gaariidha. Gara fuuladuraatti aangeessuu qofti gahaa tahuu dhiisuu danda'a. Hojii kana hojjechuuf jarri kun haalli mijataan uumameeraaf? kan jedhu dhawaataan ilaalaa deemna,'' jedhaniiru.
Muudamaa fi bakka walbuusuu kaleessa taasifame irratti, miseensa paarlaamaa Itoophiyaa tokko dabalatee namoonni hedduun, lakkoofsi dubartootaa gara hoggansaatti dhufanii gahaa miti jechaa jiru.
Biyyoota kanneen akka Ruwaandaatti aangoo mootummaa murteessoo tahan jedhamanirratti, yoo xinnaate harki 30ni dubartootaan akka hoogganamu heerri mootummaa biyyattii ni kaa'a.
Ogeettii seeraa kan taate Kunoo Alamaayyoo, ''Itoophiyaa keessatti seerri akkasii haa jiraachuu baatu malee, mootummaan akka imaammataatti wanti kaa'e ni jira. Muummichi ministiraa haarayaas dubartoota aangeessuuf xiyyeeffannaa guddaa akka kennanis himaniiru,'' jetti.
Goodayyaa suuraa 'Dubartoonni bakka kennameef seeraan ni bahatu. Malaammaltummaa adda addaatiifis karaa hin banan'
Muudamaa fi bakka walbuusuu taasifame irratti lakkoofsi dubartootaa xiqqaadha kan jedhame irrattis ogeettiin kun wayita dubbattu, ''Akka lakkoofsaatti ilaalalama taanaan ni xiqqaata. Haasaa muummichi ministiraa haarayaas taasisan irraa ka'uun, wanta guddaa eegne turre. Garuu ammas ni hafa, hooggansa murteessaa irratti kaa'amuu qabu jedheen amana,'' jetti.
''Dubartoonni bakka kennameef seeraan ni bahatu. Malaammaltummaa adda addaatiifis karaa hin banan. Kanaafuu hooggansa keessatti iddoo murteessoo tahan kennuun, hojichaafis, uummataafis mootummaafis ni tola,'' jechuun BBCtti himteetti.
Mootummaan Naannoo Oromiyaas muudama taasiseen Addee Xayibaa Hasan, Pirezidaantii Itti aantuu naannichaa gochuun muudeera. Akkasumas Aaddee Adaanach Abeebee, Aadde Habiibaa Siraaj, Aadde Ilfinash Bayeechaa, Aadde Zeeyanabaa Adamiifi Aadde Caaltuu Saaniif muudama garagaraa kenneerraaf.
Kanarrattis ogeettiin seeraa kun wayita dubbattu, ''Muudamni Mootummaan Naannoo Oromiyaa taasise hedduu nu gammachiseera. Dubartoonni bakka murteessaa tahe kennameef kunniin kanaan duras warra hojiidhaan agarsiisanii, uummata gammachiisanidha,'' jetteetti.
Muudamniifi bakka buusuun kaabinoota haarayaa taasifame gaaffilee uummanni Oromoo kaasaa tureef deebii kan deebisuudhaa?
SOAS, University of London'tti, barsiisaa kan tahe Ittaanaa Habtee, ''Rakkinni jiru akkuma jirutti tahee, muudamni har'a taasifame gara fuuladuraatti abdii natti agarsiisa jechuun eegala,''
Iddoowwan caasaa mootummaa keessaa furtuudha jedhaman, har'a namoonni Oromiyaa (DhDUO) bakka bu'an qabataniiru kan jedhu Ittaanaan, ''akka ilaalacha kootti kana booda dadhabina namoota kanaarraan yuoo tahe malee, rakkina caasaa kanaa komachuun baay'ee ulfaataa natti fakkaata,'' jedha.
''Iddoowwan kunniin Oromoof dabarfamanii erga kennamanii, bakka bu'iinsa irratti komiin jiraachuu hin danda'u.''
Ittaanaa Habtee, Barsiisaa, University of London
Angawoonni mootummaa fedeeraalaa 9 muudamanis iddoowwan garagaraarraa kan dhuufaniifi adda addummaa kan qabanidha jedha Ittaanaan. ''Jaarmiyaalee diinagdee, nageenyaafi tika biyya sanaarra jijjiiramni tahuudhaaf aggaammiifi murannoon akka jiru waan natti agarsiiseef, abdii guddaa natti hore,'' jedheera.
Siyaasni Itoophiyaa gama bakka bu'ummaatin fooyya'aa dhufeeraa gaaffii jedhuuf Obboo Ittaanaan, ''bakka bu'insaan komiin waan ka'uu danda'u miti. Bakkeewwan amma Oromoof kennaman iddoowwan akka salphaatti ilaalaman miti,'' jedha.
Obbo Umar Huseen, Sadarkaa Ministiraatti Oogganaa Ol aanaa Abbaa Taayitaa Galiiwwaniifi Gumuruuk.
Obbo Mootummaa Maqaasaa፡ Ministira Ittisa Biyyaa
Obbo Birhaanuu Tsaggaayee፡ Abbaa alangaa Walii Galaa
Jarri kun muudamuun isaanii gaaffii uummata Oromoof deebiidha jedhee akka hin fudhanne kan ibsu Ittaanaan, sababa isaas akkanatti ibsa.
''Gaaffiin Oromoo inni jalqabaa, waa'ee ofiin of bulchuuti. Ofiin of bulchuufis balbala guddaa saaqeera jedheen abdadha.
Gaaffiin Oromoo inni lammaffaa, wa'ee eenyummaa fi afaaniiti. Namoonni Oromoo kunniin iddoo furtuu tahe, mootummaa federaalaa keessatti taa'uunsaanii, Afaan Oromoo afan mootummaa federaalaa akka tahuuf balbala baneera jedheen fudhadha.''
Gama gahumsaatiin namoonni muudaman kunniin maal fakkaatu? Qoodinsi aangoo Itoophiyaatti maal fakkaata?
Akka ilaalcha paartii biyya bulchuun gahumsa jechuun amanamummaa siyaasaati kan jedhu Ittaanaan, ''qophii barnootaa qabaachuus dhiisuus ni danda'u. ''
Akka dhuunfaatti Obbo Umar Huseenin akka beeku kan dubbatu Ittaanaan, ''nama baayyee gahumsa qabanii fi aantummaa uummataa nama qabaniidha.''
Ergamaan osoo nyaata maamilaa nyaatu qabame ari’ame
Gaazexeessaa Kaashoogjiin tarree namoota Cimoo keessatti eeramee
Keeniyaan suuraa bulchitoota biyyattii saantimarraa kaaste